Fashion phezu ukubhema ugwayi electronic (noma kunalokho - guy, ngoba umuntu inhales ke ahamba ngamabili, kodwa angibhemi) uvele hhayi kudala, kodwa namuhla akuve kuvamile ukuhlangana nabantu nge igajethi stylish enjalo. I okudlekayo esiyinhloko vaypinga (indoda) - uketshezi for ugwayi electronic. Lokho-ke is batheleka a igobolondo okhethekile okuvela ngazo bese fed kuya atomiser uyabaselwa iguqulwe ibe umusi elimnandi. Bese kukhona kombuzo:-ke ingabe futhi lokhu intuthu umusi kangaka ezahlukene nokuthi ingabe iphephe kuwo umzimba? Impendulo yebo, inqobo nje uma ukhetha umakhi kunombono e-ugwayi kanye uketshezi, isibonelo, ezifana brand edumile emhlabeni wonke Joyetech. Mayelana naye kanye nemikhiqizo yakhe futhi sipho ukukhuluma.
Inkampani Joyetech - Chinese umakhi ekhona emakethe kusukela ngo-2007 futhi kakade uye wakwazi ukuba babuthane lonke ibutho abalandeli namuhla. Waziphatha yokukhiqiza ugwayi electronic, izesekeli ngabo kanye ngokugcwalisa izingoma. Uma ayaqala nje "umsebenzi" yakho Viper, sincoma siphawule lokhu brand. Fluid for ugwayi electronic inqaba Joyetech ihlukile (ngokuqukethwe ezahlukene-nicotine) kanye flavour ezahlukene, okuvumela ukuba cishe kobuhlungu kushintsha kusuka ugwayi ukubhema kuya ephakeme e-ugwayi, bese - ku ucwaningo kwakwakhiwa more nge flavour engavamile namaphunga ako.
Ukwakheka, emabhokisini kanye nezici
Fluid for ugwayi electronic Joyetech elikhona ezahlukene imikhiqizo yenkampani kusukela 2011. Yenziwe okusezingeni eliphezulu izingxenye izinga: propylene glycol, glycerin, okusezingeni eliphezulu ubumsulwa-nicotine, flavour, amanzi distilled. Ukuphepha ncenye kuqinisekiswa izitifiketi international, okuyinto kumele kukhonjiswe kwi isembozo yokuqala uketshezi. Yezinyoka izibuyekezo zabo bathi kulula ukuyisebenzisa 20- futhi 30-ngemililitha izitsha eziyisikhombisa nge "amakhala" bavale i refilling cartridges. Umkhiqizi uthi kungcono ukusebenzisa lolu ketshezi i-ugwayi electronic Joyetech yiyona brand, kodwa amagajethi nezinye brand futhi izingoma ehambisanayo.
Faka Joyetech uketshezi kuyinto viscosity yabo ephakeme (uma eqhathaniswa nezinye brand). Ngakho-ke, lapho lama ziqondakala njengoba namandla, futhi ngenxa yalokho, leso sidakamizwa edliwe kancane.
Okokuqala, siphawula ukuthi umugqa Joyetech ongazithola liquid ugwayi electronic like-nicotine kanye nicotine. Zonke izingoma le nqaba zihlukaniswe amaqembu 5:
Akekho (0 mg / ml) - e-nicotine Ukwakheka yabo engekho.
Khanyisa (4 mg / ml) - ingxenye encane nicotine. liquid okunjalo ngoba ugwayi electronic ngokuvamile abakhethiwe yilabo abaye cishe besusa ukuluthwa elimazayo.
Maphakathi (6 mg / ml) - Ukwakheka isilinganiso inqaba.
High (9 mg / ml) - e-nicotine uketshezi enjalo ngokwanele, ngakho avame akhethiwe ababhemayo ngubani kuphela ukufunda izisekelo vaypinga.
Extra High (14 mg / ml) - wokuqukethwe lelisetulu kakhulu nicotine. Uketshezi yaleli qembu ngokujwayelekile ugwayi flavour wendabuko futhi asetshenziswa ngokuyinhloko ukudala ukuxuba esekelwe amnandi izithelo izingoma.
Ngoba wonke ukunambitheka
Viper Wabasaqalayo ngokuvamile uheha bendabuko, ugwayi ukunambitheka, uketshezi for ugwayi electronic. Thenga i kokuqala ne zokunambitha nokuhogela ugwayi ethandwa (Davidoff, Camel, Dunhill, Lucky Strike, ePhalamende, njll) ongakwenza, isibonelo, i-digital Boutique futuland.ru.
uphayinaphu, orange, ikhabe, banana, amagilebhisi, ikhabe, zamapetshisi, ikiwi, kakhukhunathi, apula nabanye: Kusayithi efanayo uzoba Ukukhetha eziningi izithelo flavour thola.
Ukuhlanganisa Lovers "Coffee + usikilidi" sicela izingoma ezifana "Coffee" futhi "cappuccino".
Mint, ushokoledi, vanilla, amandla - ezinye flavour mnandi kulabo bayakwazisa ukwehluka.
Ngokuvamile, le Joyetech ketshezi bafanelwe wokubuyekezwa okuvumelekile. Yezinyoka bayakwazisa abasebenzi ukuphepha, kukhethwa inqaba futhi Yiqiniso, anhlobonhlobo flavour kanye ako.
Gloves evuthayo: ngezibuyekezo nezithombe
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo "Chico" (Trio mina-Move) - Italy izinga isampula, ukusebenza kanye liyasiza
Ikhaya imbali ebhodweni - Interior umhlobiso
Lace-up izicathulo: okulula, okulukhuni, nenhle futhi gorgeous
Battle uphawu Halaa: kuphi nokuthi yini ukuthenga?
Ukuze ufunde indlela ukususa lodonga elidala
Daron Malakian, guitarist the rock band System of a Down: Biography, empilweni yakho
Kwezinye izimo, kufanele uthole inombolo zokuthutha umphakathi?
Indawo yokudlela "Turandot" eMoscow
Owesifazane ozilungise kahle: imiyalo eyisisekelo. Indlela yokuba owesifazane ohlotshiswe kahle
Amanzi sohudo abadala: ukwelashwa. Amaphilisi sohudo kulezi abadala
Umlindi othembekile "U-Alligator", i-alamu, imfundo
Ukhilimu omuncu ikhekhe recipe - nemnandi!